Kaamirada IQ: Ka Faa'iideyso Xaqiiqada Kordhay (AR) Si Loo Abuuro Wax-Soosaar Virtual Isku day-On | Martech Zone
Kaamirada IQ: Ka Faa'iideyso Xaqiiqada Kordhay (AR) Si Loo Abuuro Wax-Soosaar Virtual Isku day-On
Khamiis, Juun 15, 2021 Khamiis, Juun 15, 2021 Douglas Karr
Kaamirada IQ, oo ah nashqad naqshad la'aan ah oo loogu talagalay Xaqiiqada Dareenka (AR), ayaa bilaabay Iskuxiraha Isku-dayga Fudud, qalab casri ah oo qaab naqshadeyn ah oo ka dhigaya mid deg deg ah oo fudud oo loogu talagalay noocyada quruxda, madadaalada, tafaariiqda, iyo qeybaha kale si loo dhiso hal-abuur AR-ku-saleysan Virtual Isku day-On khibradaha. Xalka cusubi wuxuu dib u sawirayaa ganacsiga AR isagoo awood u siinaya noocyada inay wax soo saarkooda ku lambariyaan si sax ah nolosha ugu habboon iyo xaqiiqda iyadoo lagu darayo waxyaabo badan oo sumad leh iyo barwaaqo gaar ah oo ku lug leh kuna dhiirrigeliya macaamiisha kamaradahahooda.
In kasta oo xalalka kale ay u baahan yihiin qoraal waqti-dheer ah iyo qaabab qaabeyn ama wax soo saar ballaaran iyo horumarin, Camera IQ's Virtual Try-On Composer-ka ayaa u fududeynaya astaamaha si ay u dhisaan khibrado casri ah oo la kordhiyay (AR) oo qibrad u leh waqtiga in yar. lambar koodh looma baahna Qalabku wuxuu bixiyaa xulashooyin isdaba-marin ah oo siinaya noocyada dabacsanaanta si ay si fudud ugu habeeyaan khibradaha AR oo leh xaddidaadyo gaar ah sida midabka, qaabka, qaabka, dhammaynta, iyo inbadan. Ama waxay si fudud u soo dhejin karaan moodooyinkooda 3D, iyo Iskuxiraha Isku-dayga Fudud si toos ah ayuu badeecadaha ugu turjumaa kamaradda si loogu daro olole kasta.
Si ka duwan kale teknolojiyad isku day farsamo, on Kaamirada IQ, magacyadu waxay kor u qaadi karaan khibradooda Virtual Isku day-On leh qaabab badan oo garaaf ah oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo kaqeybgalka, isdhexgalka, iyo wadaagga. Composer-ka Virtual Try-On wuxuu la yimaadaa maktabad ku habboon qaabab caafimaad oo loogu talagalay in lagu gaaro himilooyin ganacsi oo gaar ah sida kordhinta ka warqabka soo saarista alaabada, iibinta wadista ee muuqaalka iyo codsiga wax soo saarka, ku barashada macaamiisha sida loo isticmaalo alaabtooda, iyo inbadan. Noocyadu waxay u habeyn karaan qaababkan khibradaha AR, iyo xitaa u qaabeyn karaan astaamo is-dhexgal khibradooda iyagoo ku daraya waxyaabaha kiciya ee saameynta u muuqda ama ficillada ku dhaca kiciyeyaasha qaarkood, sida isticmaalaha afkiisa furaya ama shay taabanaya. Kaamirada IQ waxay markaa u adeegsataa khibradaha AR ee baaxadda leh ee Facebook, Instagram, Snapchat, iyo aalado kale, taas oo u oggolaanaysa dhagaystayaasha in ay furfuraan hal-abuurkooda hal-abuurka ah iyaga oo isku dayaya alaabada nooc ahaan.
Kaamiradii IQ ee ugu dambeysay ee la siidaayay waxay badal u tahay ciyaarta kooxdeyda. UI-da cusubi waa mid aad u macquul ah oo aad u jilicsan. Awoodda lagu dari karo hantida 3D oo lagu maareyn karo jawiga dhabta ah ee 3D wuxuu suurtagal ka dhigayaa inaan si deg deg ah oo fudud u qaadno fulinta hal-abuurnimadeena heerka xiga.
Doug Wick, Agaasimaha Naqshadeynta Mawduuca ee Nestlé Purina North America
Kaamirada IQ Virtual Isku day-On Laxamiiste
Kaamirada IQ waxay awood u siineysaa sumadaha inay ka qeyb qaataan dhagaystayaasha oo ay ku iibiyaan wax soo saar gabi ahaanba goob kasta oo laga taabto safarka macaamiisha. Iyagoo adeegsanaya nashqad-dejintooda noodhadhka ah ee ganacsiga AR, suuqleydu waxay u beddeli karaan wax soo saarkooda iyo farriinta astaanta u leh waayo-aragnimada dhabta ah ee la kordhiyay ee isku-dayga muuqaalka ah iyo ololeyaasha macaamiisha ee bulshada.
Maaddaama ay tahay koox caalami ah oo u adeegta magacyada caalamiga ah sida Viacom, Atlantic Records, Nestle, EA, MAC Cosmetics, Away, iyo in ka badan, Camera IQ waxay ka shaqeysaa dhammaan warshadaha si ay ula macaamilaan malaayiin macaamiil ah maalin kasta.
Shaki kuma jiro waxtarka AR ee isku dayga tijaabada ah, laakiin taasi waa bilowga waxa ay AR sameyn karto si ay isugu soo dhoweyso noocyada iyo dhagaystayaashooda. Kaliya maahan in AR ay waddo ganacsiga bulshada iyadoo ka caawineysa macaamiisha inay indha indheeyaan wax soo saarka, laakiin waxay u saamaxdaa inay la falgalaan noocyada qaabab cusub oo cusub iyadoo loo marayo ficil abuurka. Markay magacyadu guursadaan yutiilitida iyo baashaalka AR, waa marka ay arkaan saamaynta ugu weyn ee ay ku leeyihiin ROI: sicirka kaqeybgalka ayaa sare u kacaya, iyo suurtagalnimada beddelidda ayaa kordheysa 250%. Waxaan soo saarnay Iskuxiraha 'Virtual Try-On Composer' si aan uga caawinno magacyadu in ay dardargeliyaan istiraatiijiyadooda ganacsi, carqaladaha hoose ee horumarka, iyo in si aan caadi aheyn ay ugu fududaato in la dhiso khibradaha AR-ga ee wax ku oolka ah. Hadda nooc kasta wuxuu noqon karaa abuure AR!
Allison Ferenci, agaasimaha guud iyo aasaasaha kamaradda IQ
Si loogu dabaaldego soosaarka alaabteeda cusub ee Virtual Try-On, Camera IQ waxay iskaashi la sameysay shaqsiyaad caan ah oo abaalmarino ku guuleystay oo ay ka mid yihiin David lopez, Keita Moore, Doniella Davy, Iyo Erin Parsons si loo abuuro muuqaal qurxin dijitaal ah oo soo koobaya farshaxanka qurxinta dhaqanka. Noocyada quruxda ayaa awood u siin kara dhagaystayaashooda inay isku dayaan wax kasta oo isku dhafan oo ah lipstick, blush, eyeshadow, eyeliner, eyelashes, or accessories, oo dhammaantood leh midabbo macquul ah, qaabab, qaabab, dhammayn, iyo waxyaabo kale oo u dhigma wax soo saarkooda dhabta ah.
Noocyada tafaariiqda ayaa si fudud u diidi kara alaabtooda jirka si ay u abuuraan waayo-aragnimo u oggolaanaysa macaamiisha inay indha indheeyaan sida wax soo saarkoodu uga muuqan doono dunida dhabta ah, ama astaamaha muusikada ayaa u oggolaan kara taageerayaasha inay dib u soo saaraan muuqaalka saxeexa farshaxan ee fiidiyaha ama daboolka albumka. Baaxadda khibradaha Isku-dayga Fudud ee lagu dhisi karo Kaamirada IQ ee Composer-ka ayaa ficil ahaan aan xad lahayn.
Try Camera IQ’s AR Codso Demo a
Tags: xaqiiqda la kordhiyaykamarad iqecommerceshey isku dayshey dalwaddii isku day ahIskuxiraha Isku-dayga Fududteknolojiyad isku day farsamo
YouTube: Sida Loogu Kordhiyo Wakaaladaada ama Videographer-ka Adeegsiga Isticmaalaha Kanaalkaaga
Moz Local: Ku Kordhi Joogitaankaaga khadka tooska ah ee deegaankaaga adoo u maraya liis gareyn, sumcad, iyo maamul bixin